पाँच विकास बैंकले तोके निक्षेप र कर्जामा नयाँ ब्याजदर, कुनको कति ? - Birgunj Sanjalपाँच विकास बैंकले तोके निक्षेप र कर्जामा नयाँ ब्याजदर, कुनको कति ? - Birgunj Sanjalपाँच विकास बैंकले तोके निक्षेप र कर्जामा नयाँ ब्याजदर, कुनको कति ? - Birgunj Sanjal
३१ बैशाख २०७८, शुक्रबार १३:३६
वीरगन्ज । मुक्तिनाथ विकास बैंकले निक्षेप तथा कर्जामा नयाँ ब्याजदर तोकेको छ । जस अनुसार बैंकले निक्षेपमा ३.२५ प्रतिशत देखी ७.७५ प्रतिशत सम्म ब्याजदर प्रदान गर्ने छ । कर्जा तर्फ बैंकले बेस रेटमा २ प्रतिशत देखी ५ प्रतिशत सम्म ब्याजदर तोकेको छ ।
त्यस्तै लुम्बिनी विकास बैंकको निक्षेप तर्फ ३.५० प्रतिशत देखि ८.५० प्रतिशत सम्म ब्याजदर रहेको छ । यसको कर्जा तर्फ बेस रेटमा ५.२५ प्रतिशत देखी ८.७५ प्रतिशत सम्म ब्याज तोकेको छ । त्यस्तै बैंकको फिक्स कर्जा अन्तरगत १४ प्रतिशत सम्म ब्याज लिने छ ।
यसैगरी महालक्ष्मी विकास बैंकले पनि निक्षेप तथा कर्जामा नयाँ ब्याजदर तोकेको छ । जस अनुसार बैंकले निक्षेप तर्फ १.७५ प्रतिशत देखी ७.७५ प्रतिशत सम्म ब्याजदर प्रदान गर्ने छ । यस्तै कर्जा तर्फ बेस रेटमा ६ प्रतिशत सम्म ब्याज लिने छ । अहिले बैंकको ७.९८ प्रतिशत बेस रेट रहेको छ ।
नयाँ ब्याजदर तोक्ने ज्योति विकास बैंकले पनि निक्षेप तथा कर्जा तर्फको ब्याजदर तोकेको छ । जस अनुसार बैंकले निक्षेप तर्फ ३.२५ प्रतिशत देखी ८ प्रतिशत सम्म ब्याज प्रदान गर्ने छ भने कर्जा तर्फ बेस रेटमा ७ प्रतिशत सम्म ब्याज लिने छ । अहिले बैंकको बेस रेट ८.५७ प्रतिशत रहेको छ ।
यता कामना सेवा विकास बैंकले पनि नयाँ ब्याजदर तोकेको छ । बैंकले तोकेको ब्याजदर अनुसार निक्षेप तर्फ ५ प्रतिशत र कर्जा तर्फ बेस रेटमा ५ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको ८.१५ प्रतिशत बेस रेट रहेको छ ।